Cristiano Ronaldo Oo Doonaya In Uu Ku Biiro Laba Kooxood Midkood Iyo Juventus Oo Uu Doonayo In Uu Ka Baxo. - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Doonaya In Uu Ku Biiro Laba Kooxood Midkood Iyo Juventus Oo Uu Doonayo In Uu Ka Baxo.
March 24, 2020 Mahamoud Batalaale
Xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la shaaciyay in uu maskaxda ku haysto laba kooxood oo ay suurtogal tahay in uu doonayo sidii uu ugu biiri lahaa waxaana la sheegayaa in uu ka bixi doono Juventus.
Wargayska Diario GOL ayaa shaaciyay in Cristiano Ronaldo uu maskaxda ku haysto laba kooxood oo uu midkood ku biiri doono haddii uu kaga dhabeeyo in uu ka dhaqaaqo kooxdiisa hadda ee Juventus.
Wargayka Diario Gol ayaa shaaciyay in kooxaha Paris Saint-Germain iyo Manchester United ay yihiin kooxaha uu Ronaldo sawiranayo in uu ku biiro haddii uu ka baxo kooxdiisa hadda ee Juventus.
Warkan ayaa lagu sheegay in kooxda Paris Saint-Germain ay miiska dalab u saartay Cristiano Ronaldo isla markaana ay doonayaan in uu weerarka kooxdooda lamaane kula noqdo da’yarka Kylian Mbappe.
Arintan ayaa keeni karta in kooxda PSG ay Neymar Jr u ogolaan karto hamigiisa ah in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona halka haddii ay ku guulaystaan Ronaldo ay xal u heli karaan mustaqbalkii uu shakigu sii galiyay ee Mabppe.
Maamulka kooxda PSG ayaan marnaba doonayn in ay kooxdooda ka fasaxaan Kylian Mbappe inkasta oo la filayo in ay Neymar Jr sii dayn karaan laakiin dalabka la sheegay in ay Ronaldo ku doonayaan ayaa sii hurin karta bixitaanka Neymar Jr.
Dhinaca kale warka ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo oo 35 sano jir ahi uu isha ku hayo in uu ku soo laaban karo halkii uu waayihiisa ciyaareed ku soo barbaariyay ee Manchester United.
Laakiin haddii uu Cristiano Ronaldo ku biiro kooxda PSG waxaa hubaal ah in uu lacag badan ka heli doono isla markaana uu sare u sii qaadi doono tirada horyaalada Yurub ee uu ka ciyaaray.
Ronaldo ayaa hore uga soo ciyaaray horyaalka dalkiisa Portugal oo uu waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay, Premier league oo uu ku soo barbaaray, La Liga oo uu taariikh ka soo sameeyay iyo horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga oo uu hadda ku sugan yahay.
Inkasta oo uu Cristiano Ronaldo isku dayi doono sidii uu kooxdiisa Juventus halgan ugula gali lahaa koobabka Serie A iyo Champions League marka ay soo laabtaan, haddana warar soo baxay ayaa sheegaya in uu haysto fikrada ah in uu PSG ama Man United uu biiri doono.